?အရပွေားပျေါက ပိုးမှားမြား? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
‘လူ’ဆိုတာ ကမ်ဘာပျေါမှာတော့ အသိ ဉာဏျပညာမှာ အမွငျ့ဆုံးဖွဈပွီး ကနျြသတ်တဝါအားလုံးအပျေါ အောငျနိုငျသူပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ မကျြစိနဲ့တောငျ မမွငျရတဲ့ ရောဂါပိုးမှားလေးတှအေတှကျကတော့ လူ့ခန်ဓာကိုယျကွီးက သားကောငျပွနျဖွဈနတောကတော့ စစေ့တှေ့ေးကွညျ့ရငျ တရားရစရာ။
ကိုယျခန်ဓာကိုယျထိခိုကျစတေဲ့ ရောဂါပိုးတှေ အသာထား..လူ့အရပွေားကိုထိခိုကျစတေဲ့ ရောဂါပိုးတှအေကွောငျးနဲ့တငျ အသေးစိတျပွောရရငျ တဈထောငျ့တဈညပုံပွငျတှထေကျ လေးငါးညလောကျ ပိုသှားနိုငျပါတယျ။
ဒီတော့ အတိုခြုံ့ပွောရရငျ အကွမျးဖဉျြးအားဖွငျ့ အဓိကပိုးမှားအုပျစု (၄)ခုရှိပါတယျ။ သိုငျးစကားနဲ့ပွောရရငျတော့ ဂိုဏျးကွီး(၄)ဂိုဏျးပေါ့။
?၁? ဘကျတီးရီးယားပိုးကွောငျ့ဖွဈသော အရပွေားရောဂါမြား (Bacterial skin infections)
အရပွေားပျေါက ထိခိုကျရှနာတှကေတဆငျ့ အဖွဈမြားပါတယျ။ နဂိုရှိနတေဲ့ မှိုကွောငျ့ဖွဈစေ.. ဗိုငျးရပျဈ ပိုးကွောငျ့ဖွဈစေ.. အခွားအကွောငျး တဈခုခုကွောငျ့ဖွဈစေ ယားနတေဲ့ နရောကို လကျသညျးနဲ့ ကုတျရငျးကနေ ဘကျတီးရီးယားပိုးဝငျသှားပွီး ပွညျတညျနာ ဆကျဖွဈလာတတျပါတယျ။ ပိုးသတျဆေးလို့ချေါကွတဲ့ Antibiotics ဆေးတှေ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနဲ့ သောကျဖို့လိုပါတယျ။
– boils (အနာပဆုပျ)
– leprosy (အနာကွီးရောဂါ)
?၂? ဗိုငျးရပျဈပိုးကွောငျ့ဖွဈသော အရပွေားရောဂါမြား (Viral skin infections)
Pox Virus , Herpes Virus နဲ့Virus ဆိုတဲ့ Virus အုပျစုသုံးခုထဲက အမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဗိုငျးရပျဈပိုးတှရေဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ကိုယျခံအားစနဈကဆြငျးလာတဲ့ အခါမြိုးမှာ ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ အရပွေားအပွငျ ကနျြတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှပေါ ထိခိုကျတတျပါတယျ။ ကုတျမိရာကနေ secondary bacterial infection ဆိုတဲ့ ဘကျတီးရီးယား ပိုးတှပေါ ထပျဝငျလာတတျပါတယျ။
– shingles (herpes zoster) (ခါးပတျရယေုနျ)
– chickenpox (ရကြေောကျ)
– warts (ကွှကျနို့)
– measles (ဝကျသကျရောဂါ)
– hand, foot, and mouth disease
?၃?မှိုကွောငျ့ဖွဈသော ရောဂါမြား (Fungal skin infections)
သဘာဝအားဖွငျ့ လူ့ခန်ဓာကိုယျ အရပွေားပျေါမှာ မကျြစိနဲ့ မမွငျနိုငျတဲ့ မှိုလေးတှေ သဘာဝအားဖွငျ့ ရှိနနေိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျအခြိနျမှာ ဘာဒုက်ခမှ မပေးပမေဲ့ အပူခြိနျနဲ့ စိုထိုငျးဆမွငျ့တကျလာခြိနျတှမှော ပိုမိုပှားမြားလာပွီး ယားနာဖွဈစတောမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဆေးတှကွေောငျ့ဖွဈစေ ရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ဖွဈစေ ကိုယျခံအားကဆြငျးနရေငျ ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ခြှေးအောငျးနတေတျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခြောငျကွိုခြောငျကွားတှမှော ပိုဖွဈတတျပါတယျ။
– yeast infection ( ညှငျး)
– ringworm (ပှေး)
– nail fungus (လကျသညျးမှို)
– oral thrush (လြှာနဲ့ ခံတှငျး မှိုစှဲနာ)
– diaper rash (ကလေးသေးခံလောငျခွငျး) စတာတှဖွေဈပါတယျ။
?၄?ကပျပါးကောငျမြားကွောငျ့ဖွဈသောရောဂါမြား (Parasitic skin infections)
ပိုးကောငျသေးသေးမှားမှား ပိစိလေးတှေ အရပွေားအောကျကို ဖောကျထှငျးဝငျရောကျသှားပွီး ဥတှပေေါကျဖှား နထေိုငျပှားမြားလာရာက ဖွဈပါတယျ။
– lice (သနျး)
– scabies (ဝဲ)
– cutaneous larva migrans စတာတှဖွေဈပါတယျ။
?ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒီအရပွေားရောဂါပိုးမှားတှအေားလုံးကို ကာကှယျဖို့အတှကျ
– တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေး ဂရုစိုကျဖို့လိုပါတယျ။
– အိမျနဲ့ ပတျဝနျးကငျြ သနျ့ရှငျးဖို့လိုပါတယျ။
– ကိုယျခံအားစနဈကို အကောငျးဆုံးအခွအေနကေို မွှငျ့တငျထားဖို့လိုပါတယျ။
– နရေောငျခွညျအပူဒဏျကို တတျနိုငျသမြှရှောငျဖို့လိုပါတယျ။
?ဘာကွောငျ့ဖွဈမှနျးမသိပဲ အရပွေားရောဂါတှဖွေဈလာရငျတော့ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွဖို့လိုပါတယျ။
တှကေ့ရာလိမျးဆေးတှေ လြှောကျလိမျးရငျ ပိုဆိုးသှားတတျပါတယျ။
အရပွေားပျေါမှာ အလှတရားမှတပါး အခွားမရှိကွပါစနေဲ့…
‘လူ’ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ အသိ ဥာဏ်ပညာမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်သတ္တဝါအားလုံးအပေါ် အောင်နိုင်သူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မျက်စိနဲ့တောင် မမြင်ရတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားလေးတွေအတွက်ကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက သားကောင်ပြန်ဖြစ်နေတာကတော့ စေ့စေ့တွေးကြည့်ရင် တရားရစရာ။
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ အသာထား..လူ့အရေပြားကိုထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေအကြောင်းနဲ့တင် အသေးစိတ်ပြောရရင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေထက် လေးငါးညလောက် ပိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အတိုချုံ့ပြောရရင် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် အဓိကပိုးမွှားအုပ်စု (၄)ခုရှိပါတယ်။ သိုင်းစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ဂိုဏ်းကြီး(၄)ဂိုဏ်းပေါ့။
?၁? ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားရောဂါများ (Bacterial skin infections)
အရေပြားပေါ်က ထိခိုက်ရှနာတွေကတဆင့် အဖြစ်များပါတယ်။ နဂိုရှိနေတဲ့ မှိုကြောင့်ဖြစ်စေ.. ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကြောင့်ဖြစ်စေ.. အခြားအကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ယားနေတဲ့ နေရာကို လက်သည်းနဲ့ ကုတ်ရင်းကနေ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်သွားပြီး ပြည်တည်နာ ဆက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးလို့ခေါ်ကြတဲ့ Antibiotics ဆေးတွေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သောက်ဖို့လိုပါတယ်။
– boils (အနာပဆုပ်)
– leprosy (အနာကြီးရောဂါ)
?၂? ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားရောဂါများ (Viral skin infections)
Pox Virus , Herpes Virus နဲ့Virus ဆိုတဲ့ Virus အုပ်စုသုံးခုထဲက အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြားအပြင် ကျန်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေပါ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ ကုတ်မိရာကနေ secondary bacterial infection ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယား ပိုးတွေပါ ထပ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
– shingles (herpes zoster) (ခါးပတ်ရေယုန်)
– chickenpox (ရေကျောက်)
– warts (ကြွက်နို့)
– measles (ဝက်သက်ရောဂါ)
?၃?မှိုကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ (Fungal skin infections)
သဘာဝအားဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားပေါ်မှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ မှိုလေးတွေ သဘာဝအားဖြင့် ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန်မှာ ဘာဒုက္ခမှ မပေးပေမဲ့ အပူချိန်နဲ့ စိုထိုင်းဆမြင့်တက်လာချိန်တွေမှာ ပိုမိုပွားများလာပြီး ယားနာဖြစ်စေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးတွေကြောင့်ဖြစ်စေ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေရင် ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချွေးအောင်းနေတတ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– yeast infection ( ညှင်း)
– ringworm (ပွေး)
– nail fungus (လက်သည်းမှို)
– oral thrush (လျှာနဲ့ ခံတွင်း မှိုစွဲနာ)
– diaper rash (ကလေးသေးခံလောင်ခြင်း) စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
?၄?ကပ်ပါးကောင်များကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ (Parasitic skin infections)
ပိုးကောင်သေးသေးမွှားမွှား ပိစိလေးတွေ အရေပြားအောက်ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားပြီး ဥတွေပေါက်ဖွား နေထိုင်ပွားများလာရာက ဖြစ်ပါတယ်။
– lice (သန်း)
– cutaneous larva migrans စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
?ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအရေပြားရောဂါပိုးမွှားတွေအားလုံးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်
– တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
– အိမ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်။
– ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို မြှင့်တင်ထားဖို့လိုပါတယ်။
– နေရောင်ခြည်အပူဒဏ်ကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။
?ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိပဲ အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်လာရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့လိုပါတယ်။
တွေ့ကရာလိမ်းဆေးတွေ လျှောက်လိမ်းရင် ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်မှာ အလှတရားမှတပါး အခြားမရှိကြပါစေနဲ့…